Waxaa jiro liis ku soo gabagabeeyay kulan xujo oo ku guuleysatay jaceylka ah go'aynin by caashaqi jiray ciyaarta oo mar kale waxaa jira liis dheer oo kulan sida in badan oo ka mid ah taageerayaasha waalan, addict ee ciyaaraha iyo xalinta mushkiladda. Maanta, helitaanka dadka in kulan noocaas ah oo la fududeeyay badan la hordhaca ah ee kulan xujo android. Sidaas, hadda qof iyo qof kasta oo phone fudud android raaxaysan karo kulan in aan noqon doono mid xiiso leh, laakiin sidoo kale caawinaad weyn oo kaliya fiicneeyay xusuusta iyo hagaajinaysa hawlaha maskaxda in ugu dambeyntii keenta in la waxbarasho fiican. Waxaa jira in badan oo kulan android lacag la'aan ah, si kastaba ha ahaatee wuxoogaa yar oo iyaga ka mid ah oo aad ku kici doonto dhowr doolar laakiin waa bet ah in ay u qalmaan wax iibsiga iyo sidoo kale.
Sidaas, halkan waa farabadan oo toban kulan oo ku guuleysatay Quluubta android kulan xujo caashaqi jiray sababo badan oo ay ka mid yihiin mawduucyada, naqshadeynta, saamaynta muusikada iyo wixii ka sarreeya oo dhan adventures dahsoon iyo maskaxdaada waxay afuufayeen xujooyinka.
1. mashearulxaraam Valley
Platform: Android 2.3.3 waa baahida ugu yar ee ciyaarta.
Complete dawayn maqal iyo muuqaal ah A yimaado kulan xujo this. Player Hanuuniyo amiirad yar hadal riyo la baxay Isboortiga aduunka iyo guuleysan dhibcaha iyo aad u badan.
Platform, baahida ugu yar ee OS u ciyaaro kulankaan waa Android 4.0.
Haddii kulan ayaa laga yaabaa in la kala saaraa iyo abaal in tayooyinka sida cute markaas threes ay noqon lahaayeen kuwa ugu sareysa ee liiska. Ma waxay u muuqdaan kuwo macno? Markaas download iyo ciyaaro lambarkan xujo tallaabadaas oo ay ogaadaan in sida badan xaq ahna cuteness dheer waa for "Threes".
Magaca kulankaan laftiisa waa soo jiidasho iyo theme waa sheeko arrin. Waa sida soo jiidasho leh sida fikradda ah Sawirashada dhawaaqa, mid ka mid ah oo aan caadi ahayn, laakiin dadka waalan inay ku sii noolaadaan 80 heerar ee ciyaarta baabuur-wadidda. Game ma aha oo ku saabsan in ay ka cabsada jinsi mid qalbigiisu laakiinse waa mid ka mid ah ayaa heegan ku hay xaqiiqada ah in hab mugdi meesha dhawaaqa kasta oo aan la soo kabsatay oo keliya laakiinse waxa sharka ah soo dhow.
Platform: baahida OS Yar ee ciyaarta waa Android 2.3.
Lyne waa sharaxaad kaamil ah oo wax ku ool ah oo ka mid ah leh "fududaan waa koobaa kama dambaysta ah.". Haa, ciyaaryahanka qabaa waxaa laga yaabaa in ay tahay in ay la tacaalaan set fudud ee xujooyinka laakiin markii uu isagu / iyadu ka bilowdey u ciyaaro fudud, xaqiiqooyinka la muujiyey in aysan wanaagsan in dhayalsan ay ka iman kara ee kaakicin maskaxda.
Platform: 3.0 Android oo ilaa
Kulan dagaal Tani waa ay qaataan si ay gacanta cadowga ay ku amrayo unugyada. Tani waa dhaqaaqdo ku saabsan maskax leh, maxaa yeelay, degdegay in dhaqaaqdo dhammaan doontaa in Buuqa.
6. weeraryahanka Go
Platfrom: Android 2.3.3 waa yar ee looga baahan OS.
Tani waa mid ka mid ah kulan xujo in aan ka maqnaan doona. Hagaha wakiilka-47 ilaa dhammaadka loo qoondeeyey ee heer kasta, laakiin aan in fudud, taasna waa sababta waa ciyaar xujo ah.
Platform: OS Yar ee 2 Blockwick waa Android 4.0.
Waa waalli ah midabo loogu ururinayo ka blocks midabka isla 160+ heerarka. Waxay u ekaan arrin shaqo fudud marka hore, laakiin waxa dhab ahaan ma aha in fudud.
Platform: OS Yar ee ciyaaro kulankaan, waa Android 4.0.
Waa sahamin dunida aan la aqoon weli soo jiidasho leh. Asal ahaan ciyaarta waa in la helo helicopter ah oo dunida ka baxdaan qalaad laakiin Dhanka kale ciyaaryahanka ayaa ogsoon in ay jirto wax badan oo ka badan helitaanka helicopter ka soo. Dunida 3D si caqli ah loogu tala galay bixisaa ciyaaryahanka boorish oo xiiso leh labadaba; hawlaha fudud oo adag in ay si dadka ku hawlan saacado, iyadoo aan la tuuro onthem dareen xiiso.
Skyward waa xujo meesha sare ciyaaryahan tago in xujo ah, qofka sare ah dhalin doono iyo samada waa xadka. Mar kasta oo scoreboard ka intrigues goolasha inuu garaaco / iyada rikoor hore u gaar ah.
Platform: Android 2.2 waa shuruudda ugu yaraan OS
Kuwa badan oo aydaan dhigin dhinaca midabada, KAMI waa ciyaarta ugu fiican iyaga u. Maxaa ka dhigay waxa ay si rafcaanka waa walaac ah in waxa uu noqon lahaa midabka ah in la soo bandhigay by kasta guji sababtoo ah set gaar ah u dhaqaaqdo, screen baahan yahay in la midab ee hadh kale shaacbaxaysa ee gogo 'oo warqad.
> Resource > Emulator > Top 10 Games xujo u Android